Paws nke oké iwe | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Paws nke oké iwe | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Paws nke oké iwe
Paws nke oké iwe bụ a oghere egwuregwu na a isiokwu dabeere na karat na-anya dị ka ọ na-sitere n'ike mmụọ nsọ Kung fu panda usoro nke movies. Na nke a fun jupụtara ekwentị oghere welcome bonus game, e nwere ise-esi anwụde na iri abụọ nọ n'ọrụ ịkụ nzọ edoghi. The-esi anwụde na-setịpụrụ n'ime a Chinese temple na a sinik echiche nke ọdịdị na-adọrọ osisi. The panda nwere ike hụrụ na-atụgharị uche na-esote na-esi anwụde na-ese n'elu mmiri na ikuku na ike ya. E nwere ihe ụlọ nsọ oge ochie music na-egwuri egwu na-akụ n'okirikiri na ọ bụ nnọọ obi ka ntị. Iji kpọọ gị nzo, e nwere mkpụrụ ego na ụkpụrụ na-amalite £ 0,20 na-agwụcha na max £ 500 ọ bụla atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke paws nke oké iwe
Nke a karat themed ekwentị oghere welcome bonus game e kere site ntụziaka. A na-ewu ewu casinos egwuregwu ụlọ ọrụ na-kere ọtụtụ narị egwuregwu na asatọ niile ụdị egwuregwu. Ha nwere dị iche iche na utu aha nke ohere mpere nakwa dị ka ọkachamara table egwuregwu ịhọrọ site na.
The nnọchianya nke a ụtọ katuunu style ekwentị oghere welcome bonus game dị nnọọ yi. E nwere egwuregwu logo na a ọlaedo ọta, a cat ejiji ka a ninja, a nnukwu efere nke now achọ dumplings, a akwụkwọ na ụlọ nsọ njiko. The otu na-akwụ gị ihe kasị bụ logo nke oghere na 500x gị ịkụ nzọ. Iji nweta na ị ga-ala ise n'ime ha gafee ifịk payline. J, A, K na Q si play kaadị ịkwụ ụgwọ ala stakes nke ụgwọ ọrụ. The bonus ndị na-kpuchie site panda ihu na ya ọlaedo ubọk ebipụta.
Wild daashi: The nnọchianya nke ọlaedo ubọk Mbipụta nke panda bụ anụ a ekwentị oghere welcome bonus game. Ọ na-anọchi niile ma panda ihu akara.
Gbasaanụ daashi: The panda ihu bụ ikposa na akara ma na atọ ma ọ bụ karịa nke ya na-egosi elu, i nwere ike ịkpalite otu n'ime ise dị iche iche bonuses. I nwere ike imeri free spins dị iche iche multipliers na-akpali akpali ndị ọzọ na atụmatụ ha.
King jackpot: Mgbe ihe nnọchianya nke jackpot eze ala ugboro ise gafee esi anwụde, na ị na-ọdịda a jackpot na-agbata n'ọsọ. The uru nke a na-agbata n'ọsọ nwere ike ịgbago 1000 ugboro na gị ngụkọta wagered ego.
Summary: Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya karat mgbe ahụ, a bụ ihe kasị mma ekwentị oghere welcome bonus game dabeere na ya. I nwere ike na-enweta ihe ụtọ gameplay na ọtụtụ ịtụnanya iji merie si.
Alaeze nke Àkù